Harona fanaovana mofo, harona fihinana, harona azo zahana - Prolink
Orinasa mpanafatra sy manondrana matihanina izy io, ny vokatra lehibe indrindra dia ny satroka, palitao, kitapo, zipo ary fanomezana Promotional. Ny vokatra rehetra dia aondrana any Eropa sy Amerika ary manerantany.
Mandritra izany fotoana izany, ny orinasanay dia manana ekipa matihanina iray, miezaka hatrany amin'ny fikarohana sy fampandrosoana vokatra vaovao, manamafy sy manatsara ny fizotran'ny vokatra sy ny rafitra fitantanana.
Manana ekipa injeniera matihanina izahay hanome izay ilaina amin'ny antsipiriany rehetra. Ny santionany maimaimpoana dia azo alefa ho anao manokana hahafantatra zava-misy misimisy kokoa.
010001: satroka korduroy, satroka amboradara, satroka 6 panam ...
6602: satroka landihazo borosy mavesatra, satroka mifono sisin-tany
884: lamba vita amin'ny rongony
694: satroka ririnina, satroka fampiroboroboana
677: lamba firakotra volon'ondry polotika, lamba firakotra fampiroboroboana
524: Cap vita amin'ny landihazo, satroka takelaka 5, satroka fampiroboroboana
366: satroka landihazo, satroka takelaka 6, satroka lamaody
211: satroka pataloha jeans fampiroboroboana
647: lamba vita amin'ny volon'ondry polar
467: fonon-tànana vita amin'ny ba nataony
020011: satroka baseball 6 tontonana
Hebei Prolink Import & Export Trading Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny Shijiazhuang City, faritanin'i Hebei. Orinasa mpanafatra sy manondrana matihanina izy io, ny vokatra lehibe indrindra dia ny satroka, palitao, kitapo, zipo ary fanomezana Promotional. Ny vokatra rehetra dia aondrana any Eropa sy Amerika ary manerantany.
Miaraka amin'ny fitomboana tsy tapaka sy fanavaozana ary fanavaozana ny vokatray, ary koa ny fanatsarana ny kalitaon'ny serivisy, ary ny fanitarana ny fahafaha-mamatsy, manome anay mpanjifa sy tsena maro kokoa.
Manatrika ny import sy Expo sinoa faha-128 ...
Ny orinasanay dia manatrika ny fampirantiana China Import sy Export 128, mandritra ny foara, ankoatra ny fampisehoana i ...
Hebei prolink fanafarana sy fanondranana varotra co.ltd.ary nametraka hatrany ny kalitao tamin'ny voalohany. from ...
Hebei Prolink import & Export Trading Co., Ltd. dia nihevitra hatrany ny fampandrosoana ny vokatra ary ...